မုံရွာကျောက္ကာတွင် ရေနံချက်ရာမှ ချက်ဖိုတစ်လုံး မီးလောင် - Yangon Media Group
မုံရွာကျောက္ကာတွင် ရေနံချက်ရာမှ ချက်ဖိုတစ်လုံး မီးလောင်
မုံရွာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ် ကျောက္ကာရွာအနီး ရေနံ ချက်ဖိုတွင် ရေနံစိမ်း ချက်ရာမှ ချက်ဖိုတစ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းမှု စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မုံရွာခရိုင်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ”ရေနံစိမ်းချက်ရင်း ချက်ဖို ဆီတိုင်ကီပါးပေါက်တယ်။ အဲဒီ ကနေ ယိုလာတဲ့ဆီကနေအောက်က ထင်းမီးနဲ့တွေ့ပြီး မီးလောင် တာ”ဟု မုံရွာမြို့နယ် မီးသတ် ဦးစီးဌာန ဒုဦးစီးမှူးဦးတင်ကိုကို က ပြောသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသော ကျောက္ကာရေနံချက်ဖိုနှင့် တိုင်း၊ ခရိုင်မြို့နယ် မီးသတ်ရုံးများရုံး စိုက်ရာ မုံရွာမြို့သည် ၁ဝ မိုင် ခန့်ဝေးကြောင်း၊ မီးလောင်ပြင်သို့ မီးသတ်ကား ၁၂ စီး၊ ရေသယ် ယာဉ်လေးစီး၊ သန္ဓေ ၄၅ ဦး၊ အရန် ၅ဝ ဦးနှင့် ချက်ဖိုလုပ်သား များက ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်သဖြင့် မီးသတ်ကားရောက်ရှိပြီး နာရီ ဝက်ခန့်အကြာတွင် ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် ရေနံ ချက်ဖိုတစ်လုံး၊ ချက်ဖိုဆောင် တစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ ပြီး မီးလောင်ရာသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ကြီး ကြပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ယင်းချက်ဖိုပိုင်ရှင်မှာ ဦးမြင့်ဝင်းဖြစ်ပြီး ချက်ဖိုမှတာဝန် ခံကို မီးပေါ့ဆမှုပုဒ်မ-၂၈၅ ဖြင့် မုံရွာမြို့နယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှု ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ကျပ် ၂၁၇၅ ဘီလီယံနှင့် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ကျပ် ၁၁၃၁ ဘီလီယံထ??
မြောက်ကိုရီးယား နူကလီးယား စမ်းသပ်ပြုလုပ်ရာ နေရာများကို အပြီးတိုင်ဖျ က်ဆီးမည်ဟု ကင်ဂျုံအန်
ယူကျူ့မှာ ကြည့်ရှုသူ သန်း ၄ဝဝ အထိရှိခဲ့တဲ့TWICE အဖွဲ့
အာဖဂန်နစ္စတန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု လူ ၅ဝ သေဆုံး
တောင်နဝင်း ရေလှောင်တမံ ဆက်လက်အသုံးမပြုရေး ပြည်သူ့အစိုးရထံတောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော်
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သတ?
ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင်နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်သော ဝေဖန်မှုများအပေါ် ပေါ့ဂ်ဘာ တုံ့ပြန်